Kenya oo sheegtay in Alshabaab ay kabaxeen Laamu iyo Booni – Radio Daljir
Oktoobar 11, 2017 7:22 b 0
Dowladda Kenya ayaa sheegtay kaddib howlgallo xiriir ah oo ciidamadeeda ay ka sameeyeen Keynta Booni iyo Degaanka Lamu in ay horseedday in Al-shabaabbay ka baxaan degaannada xeebta ah.
Agaasimaha howlgalka xoreynta Boni ee Kenya Joseph Kanyiri,ayaa sheegay in 5; ka mid ah Al-shabaab ay dileen islamarkaana ka furteen 6 Qori oo AK47 ah,321 xabbo oo Rasaas ah,Saddex Garneyl iyo Waxyaabaha qarxa.
Howlgalka Ciidamada Kenya ayaa jirsaday lix sano Bishan ayuuna gaarayaa sanadkii lixaad,Al-shabaab waxaa ay wali ka dagaallamayaan gudaha Kenya waliba si ka xoog badan sidii howlgalka Al-shabab ee gudaha Kenya uu ahaa ka hor 2011kii.
Joseph Kanyiri,waxaa uu sheegay in Ciidamada KDF ay sameyaan howlgal joogto ah joogitaankooda degaankaasna uu aad u badanyahay islamarkaana ay helaan xogta Ragga ka tirsan Al-shabaab.